Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry : zarazarao ny fahendrenao Ramose Botovasoa | NewsMada
Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry : zarazarao ny fahendrenao Ramose Botovasoa
Tsy mila miandry Pantekosta amin’ny taona ity dia antenaina fa hilatsahan’ny Fanahy Masina ireo ngeza lahy mpanao pôlitika. Ireny mantsy izy rehetra fa nihazakazaka daholo any Vohipeno. Fihaonam-ben’ny Katolika ao amin’ity renivohitra ny Antaimoro, tànana amin’iny atsimo atsinanan’ny nosy, faritra namoaka olomanga sy olomarina tsy hita ho tanisaina sao misy adino noho hamaroany.
Olona tokana kosa anefa no nomena hasina manokana tamin’ny faran’iny herinandro dia Lucien Botovasoa izay natsangan’ny Eglizy Katolika ho anisan’ny Olomasina. Voninahitra lehibe izany ary nidodododo nanome voninahitra izany ny katôlika rehetra izay afaka namonjy izany fankalazana masina izany. Tsy gisitra amin’izany ny mpanao pôlitika. Mafana izao ny lalao ka tsy misy fisehoana imasom-bahoaka tsy ho araraotina. Hamory olona aza hatao mainka fa misy ny toy izao. Maro ny mpifidy ao amin’ny vahoaka katolika ka sitrany ahay mba hisehoan’
ny tena mba olo-mendrika manaja izany hoe fivavahana izany.
Efa nampitandrina anefa ny Konferansin’ny Eveka, nilaza ny tsy fahamendrehan’ny filalaovana pôlitika toy ny tazana ankehitriny. Tsy misy intsony ny fahamarinana fa fitiavan-tena no manjaka, fampahantrana ny vahoaka no miseho, kolikoly no mibaiko, fidangan’ny vidim-piainana no mandifotra ny mponina. Vely kanota angamba tsy mihoatra an’izany, nefa tsy nataon’ireo vaventy hanakana azy izany. Angamba kosa tonga ho bedesin’ny raiamandreny am-panahy ry zalahy. Vonona hihaino anatra ka mety samy hibebaka ny tsirairay. Fahagagana anefa raha izany no mitranga. Na ny anankiray aza dia tsy nahitana nisoritra teny amin’ny tarehiny izany hoe fanetren-tena izany. Toa mibontsibontsina izy rehetra samy misisika ho hita avokoa. Tazana sahady fa toy izany rahampitso, samy hilaza daholo fa izy irery no mahavita azy ho mpamonjy ny vahoaka sy ny tanindrazana. Tsy hita hakisoka izy ireto, hany herin’ny vahoaka izay mino sisa dia miangavy an’itompokolahy Botovasoa izay nasondrotra ho akaikin’Andriamanitra mba hangataka anjara fahendrena amin’Andriamanitra ho an’ireto kalita lahy ireto fa efa diso mangana loatra ny olona madinika eto amin’ny Nosy.